७ महिनापछि नेप्सेमा उछाल, ३० कम्पनी मालामाल ! - सिम्रिक खबर
७ महिनापछि नेप्सेमा उछाल, ३० कम्पनी मालामाल !
काठमाडौँ । शेयर कारोबारको साताको लागि अन्तिम दिन आज विहिबार ३० कम्पनी मालामाल भएका छन् भने नेप्से परिसूचकमा पनि छाल आएको छ। ३०.७८ अंकले नेप्से परिसूचक वृद्धि हुँदै १५७२.१८ को विन्दुमा उक्लिएको छ। आज सर्वाधिक कमाउने कम्पनीहरुमा हाइड्रोपावर, होटेल्स र फाइनान्स लगायतका ३० वटा कम्पनी परेका छन् । त्यसैगरी आजको दिनमा ३ अर्ब ७२ करोड ६८ लाख भन्दा बढीको कारोबार भएको छ । सात महिना पछि नेप्सेमा यस किसिमको उछाल आएको हो । आज नेप्से उपसमूहमा रहेका १२ समूहमध्ये ११ वटामा हरियाली छाएको छ भने एउटामा रातो लागेको छ ।
विहिबारको दिन सबैभन्दा धेरै होटेल्स् समूहमा १६१.५१ अंकको वृद्धि भएको छ । जलविद्युत् समूहमा ८८.३८ अंक, बैंकिङ समूहमा २८.०७ अंक, विकास बैंक समूहमा ६६.०४, फाइनान्स समूहमा ४१.९५ अंक, जीवन बीमा समूहमा ४९.८८ अंक, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहमा १३.३२ अंक, लघुवित्त समूहमा १२.२१ अंक, म्युचुअल फन्ड समूहमा ०.११ अंक, अन्य समूहमा ८.६९ अंक र व्यापार समूहमा ६.५६ अंकको वृद्धि भएको छ तर निर्जीवन बीमा समूहमा ०.४१ अंकले गिरावट आएको छ ।
कस्ले कमाए बढी ? आज ३० वटा कम्पनीको सेयरमूल्यमा पोजेटिभ सर्किट लागेको छ। यो दिन रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, सोल्टी होटेल, हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर र तारागाउँ रिजेन्सी होटेलको सेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । कालिका पावर, अरुण भ्याली जलविद्युत, श्री इन्भेस्टमेन्ट, गुहेश्वरी मर्चेन्ट, वरुण हाइड्रोपावर, रिलायन्स फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स, सेन्जेन लघुवित्त, ओरेन्टेल होटेल्स, छ्याङ्दी हाइड्रोपावर, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक, आँखुखोला जलविद्युत, दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर, नेसनल हाइड्रोपावर, जोशी हाइड्रोपावर, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर, सिनर्जी पावर, युनियन हाइड्रोपावर, राधी विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट, अपी पावर, खानीखोला हाइड्रोपावर, राइराङ हाइड्रोपावर, नेपाल हाइड्रो, पञ्चकन्या माई हाइड्रो र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सेयरमूल्य पनि १० प्रतिशत हाराहारीमा वृद्धि भएको छ। आज एनआरएन लघुवित्तको सेयरमूल्यमा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा गिरावट आएको छ।